Guddoomiyaha Aqalka Sare oo la kulmay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre – Kalfadhi
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo la kulmay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre
September 21, 2020 Hassan Istiila
Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shalay ku booqday hoyga uu ka degen yahay Muqdisho Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, waxaana kulankaasi uu ahaa mid is wareysi xaaladaha siyaasada dalka Soomaaliya loogaga hadlay.
“Sharaf ayey ii ahayd la kulanka guddoomiyaha Aqalka Sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maanta isoo booqday. Waxaan uga mahadceliyay kaalintii uu ka qaatay hannaanka loogu gudbayo muddo xileed cusub ee dowladda Soomaaliyeed”ayuu yiri Xasan Cali Kheyre.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo dhowaan ku dhowaaqay inuu yahay musharax xilka Madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa wada dadaalo uu ku doonayo inuu ku helo taageere siyaasadeed, waxaana dhowaan uu la kulamay Prof Jawaari oo horay usoo noqday Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Madaxweyne Farmaajo! Ma buur jifi ah ayuu dhistay oo ka dhalaashay? Ma lumiyey fursaddiisi mise weli wuu leeyahay?
Axmed Madoobe oo ugu baaqay xildhibaannada laga soo doortay Jubbaland inay ansixiyaan heshiiska doorashada iyo Ra’iisul wasaaraha cusub